Joinha SHL-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>KUSANGANA SHL>Joinha SHL
nzvimbo Dhipatimendi dzidzo nhamba Sunungura nguva
Kutengesa kwakawanda Dhipatimendi rekutengesa Bachelor degree kana pamusoro 3-5 2020-04-09
1. Kuvandudza bhizinesi: zvichibva pakunakira kwekambani mumitero yekutakura uye zviwanikwa zvakasiyana siyana, vachikurukura uye zvinobudirira kutaurirana nevamiriri vekunze uye vatengi vekumba, zvinoenderana nekambani yemusika musika, kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi zvakasimbiswa;
2. Vatengi sevhisi: zvinoenderana nezvinodiwa nevamiriri vemhiri kwemakungwa nevatengi, kuronga uye kuronga basa remadhipatimendi akakodzera senzvimbo yekubhuka, mashandiro, magwaro, mari, nezvimwe, chengetedza hunhu hwebasa rerubatanidzano rumwe nerumwe, sangana nezvinodiwa nevamiririri. nevatengi, uye vanobata nemazvo zvese zvichemo neMazano;
3. Sisitimu yekupinda: inokodzera uye nekukasira kuisa mhando dzese dzedata sezvazvinodiwa, inokasira kugadzirisa, isa uye ongorora marudzi ese ezvitatimendi zvebhizinesi uye data rakanangana nenguva;
4. Kubatana kwebhizinesi: kubatsira mamwe madhipatimendi akakodzera kutaurirana nevamiriri vemhiri kwemakungwa, uye kuona kuti mamwe madhipatimendi ebhizinesi anogona kushandisa zvakazara wekunze mumiriri mumiririri uye zviwanikwa zvekuvandudza mabhizinesi anoenderana.
5. Kuvandudza bhizinesi: chengetedza kutaurirana kwakanaka nevashanyi, kubata panguva yakakodzera zvinodiwa zvakasiyana zvevaenzi, uye nekupa iro rinogona kuve bhizinesi kune iro dhipatimendi nemamwe madhipatimendi ane chekuita nebhizinesi.
1. Anopfuura makore maviri ruzivo mune ino indasitiri, kusanganisira anopfuura gore rimwe chiitiko mune yakasarudzika nhumbi oparesheni, unoziva neakasarudzwa mutoro oparesheni modhi, yakasimba kuramba kumanikidza
2. CET 4 kana pamusoro, inokwanisa kushandisa Chirungu semutauro unoshanda, kugona kuteerera, kutaura, kuverenga nekunyora.
3. Anofara, anoda kutaurirana, anoda kudzidza nesimba, aine ruzivo rwekutengesa uye mweya wakasimba unoshanda.
4. Inoziva kushambadzira nekusimudzira facebook, twitter, youtube uye mamwe masocial network masosi ekuwedzera huwandu hwevateveri
5. Bata nezvakakodzera zvekutengesa mishumo uye kuongororwa kwedata
Gamuchira tangazve email: [email inodzivirirwa]
Overseas mashandiro Dhipatimendi rekushandisa Bachelor degree kana pamusoro 3-5 2020-04-09
Kumhiri kwemabasa ekushanda:
1. Webhusaiti kuvaka, kusanganisira webhusaiti dhizaini, kugadzira webhusaiti, webhusaiti mashandiro, kusanganisira dhizaini yemifananidzo, kunyora zvinyorwa, kugadzirisa zvinyorwa, nezvimwe
2.Google Natural ranking optimization, akawanda masayiti akawanda mazwi akakosha Google uye bing uye yahoo uye imwe yekutsvaga injini peji peji chinzvimbo,
3. SEM Google yakabhadhara kukwidziridzwa uye kuiswa, kudzora mutengo, kudzora njodzi, kudzora mazwi akakosha, kutonga kwevateereri, nezvimwe, kuwana kubvunzana kwakanyanya kwevatengi.
4. Inotarisira mashandiro uye kugadziriswa kwenzvimbo yemakambani enhau enhau, senge facebook, instagram, twitter, youtube, nezvimwewo, uye kugadzirisa ruzivo rwechiratidzo nemufananidzo wechiratidzo cheakaundi marezinesi enhau kuburikidza nemaitiro anoshanda anoshanda.
5. Vakatora chikamu pakuronga midhiya yekutaurirana, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa: kuronga Angle yekutaurirana, kunyora kopi yeChirungu, kutsanangura kuburitsa midhiya, nezvimwe.
6. Gadziridza uye gadzirisa zvirimo webhusaiti yepamutemo yekambani.
7. Network-wide yekutarisa uye kuburitsa kwezviitiko zvakakura zvematambudziko.
8. Mushure mekutengesa rutsigiro rwebhizinesi rekunze kwenyika.
1. Bachelor degree kana pamusoro, chikuru muChirungu, utapi venhau, veruzhinji hukama, kushambadzira, kushambadzira kana zvine hukama.
2. Nyanzvi yeChirungu yakanyorwa uye dudziro, inotsetsenura kutaura nemuromo.
3. Unyanzvi mukushandisa software yehofisi.
4. Kunaka pakutaurirana kwetsika nemagariro uye kutaurirana kwedhipatimendi.
5. Unyanzvi hwakanaka hweChirungu hwekunyora.
6. Kunze kwenyika kutengeserana kweChirungu webhusaiti ruzivo rwunosarudzwa, yekutsvaga injini Google. Bing. Yandex, vezvenhau fb.
7. Bhizimusi repamusoro mhiri kwemakungwa uye zvine chekuita nekunze kwemakungwa zvinosarudzwa.
Kutengesa kutengesa Dhipatimendi rekutengesa Koreji degree kana pamusoro 3-5 2020-04-09
1. Nzvimbo yehunyanzvi, inogara ichizadza zvakawandisa zvebasa pasi pehutungamiriri nekutariswa neiye wepamusoro, uye anokwanisa kuzvimiririra kugadzirisa nekugadzirisa mabasa ari mukutungamira, kuziva neindasitiri yekuendesa nhumbi, uye kushuvira kuve mune indasitiri yekutakura zvinhu yekutakura zvinhu nguva refu.
2. Inotarisira kuvandudza iyo kambani / Marine / mhepo / njanji / inorema nhumbi / hombe yekutakura / ro-ro bhizinesi rekutakura;
3. Batsira wepamusoro maneja nekugadzirisa musika, kuteedzera uye kuongorora kuiswa kwezvirongwa zvakasiyana zvekushambadzira;
4. Kubatsirwa mumabasa ekutsvagisa pamusika zvigadzirwa zvekambani;
5. Inotarisira kugadzirwa nguva dzose uye kushambadzirwa kweshambadziro yekambani;
6. Yakaunganidzwa ruzivo rweiyo indasitiri mumusika, yakapinda mukuronga kwekuburitswa kwekambani zvigadzirwa, kuratidzira uye zvimwe zviitiko.
7. Chengetedza nekuvandudza matsva ekutengesa uye vatengi vatsva; ipa zvigadziriswe uye zvakagadziriswa zvigadzirwa zvekugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
1. Koreji koreji kana pamusoro, chikuru mukushambadzira kana manejimendi inosarudzwa;
2. Inozivikanwa neyekunze logistics kutumira _ indasitiri, kutengesa uye manejimendi ruzivo rwunodiwa;
3.Kushanda kufunga, kushambadza mweya uye hunhu hunhu;
4. Akatendeseka uye akarurama, anofara uye anozvibata, akanaka mukutaurirana nevamwe;
5. Iva nehumwe kurongeka uye kugona kuronga, unokwanisa kutsungirira uye kupaza kuburikidza nekumanikidza kwebasa, uye kuve wakanaka maneja wenguva uye wega-wega mutyairi.
Kushambadzira nyanzvi chinzvimbo Dhipatimendi rekushambadzira Koreji degree kana pamusoro 3-5 2020-04-09
Kushambadzira nyanzvi chinzvimbo chinzvimbo
1.Kuitisa tsvagurudzo yemusika, yakaunganidzwa uye kuongororwa maitiro akakodzera emusika, uye yakapa hwaro hwevatungamiriri kuita sarudzo;
2. Kubatsira vatungamiriri mukugadzira zvirongwa zvekushambadzira uye zvirongwa zvekusimudzira;
3. Ita basa racho zvinoenderana nechirongwa chakashambadzirwa chekushambadzira, uye uve nebasa rekuongorora zvinoitika mumabasa ekushambadzira;
4. Tevedza uye taura nevatengi, nyora zvavo mhinduro, uye uvandudze chirongwa chekusimudzira zvinoenderana nezvavanotaura;
5. Teerera uye ubate musika musimba, uye teerera kune zviitwa zvevanokwikwidza;
6. Muchiitiko ichi, teerera kudzora bhajeti, uye ubatirane nemamwe zvikwata zvine chekuita nekusimudzira zvigadzirwa, kusimudzira zvigadzirwa uye kusimudzira kutengesa;
7. Inoita zviitiko zvekusimudzira musika, uye nekuchengetedza hukama hwevatengi munzvimbo dzakabatana.
8. Inotarisira kugadziriswa kwehukama enhau dzakakodzera maererano nehurongwa hwevatungamiriri;
9. Zvinoenderana nezvinodiwa pamusika uye nemaonero evatengi, isa mberi Mazano ekuvandudza zvigadzirwa zvekambani, masevhisi nekusimudzira.
Iko kugona kweyekushambadzira nyanzvi
1. Iva neruzivo rwekushambadzira rwakakodzera uye uzive musika wezvigadzirwa.
2. Simba rekusimudzira bhizinesi kugona uye kugona kweruzhinji hukama;
3. Kutaurirana kwakanaka uye kugona kuronga.
4. Kugona kwakanaka kwemusika;
5. Iva nehungwaru pamusika nzwisiso uye kugona kwemusika kuongorora;
6. Mutambi wechikwata akanaka.
Mvumo yekushambadzira nyanzvi
1. Koreji degree kana pamusoro mukushambadzira;
2. Iva neruzivo rwekushambadzira rwakakodzera uye ziva musika mushambadziro wezvigadzirwa zvebhizimusi;
Angangoita 3.1 makore akakosha ekushanda ruzivo;
4. Simba rekusimudzira bhizinesi kugona uye kugona kweruzhinji hukama;
5. Iva nehungwaru pamusika nzwisiso uye kugona kwemusika kuongorora
Project manager Dhipatimendi rekushambadzira Dhigirii reYunivhesiti kana pamusoro 1-2 2020-04-09
1. Nzwisisa zvinoitika zvemusika, uye shingairira kutsvaga vakanakisa vatengesi uye migero yekubhuka yeiyo ro-ro chikepe kumabvazuva kweavo vane misiyano varidzi vezvikamu zvakanakisa;
2.Tora basa rekuvandudza musika bhizimusi rinokwikwidza mukana; Mazuva ese zvinhu zvinotakura uye ro-ro zvinotumirwa, hombe pallets kubvunza kuteedzera.
3. Inoona nezvekuwedzera nekusimudzira bhizinesi rine chekuita negirosari rakawanda, zvikamu zvakakura uye Rimwe Bhandi Uye Imwe Mugwagwa zvigadzirwa zveinjiniya, uye kugadzira nekuchengetedza kambani hombe grocery sevhisi network;
4. Akaongorora mapoka evatengi uye achienderera mberi achiavandudza kuti aderedze njodzi dzekuita.
5. Nyatsoteerera kushanduko yemusika, taurirana nevatengi kuburikidza nezvibvumirano zvakakodzera, uye uwane mabhenefiti akakwirira kukambani;
6.Kutaurirana nevatengi kuburikidza nharembozha neInternet chiteshi, vakanzwisisa zvinodiwa nevatengi, vakatsvaga mikana yekutengesa uye vakabatsira maneja kuzadzisa zvinangwa zvechikwata
7. Saina charter bato uye ushande pamwe nedhipatimendi rinoshanda rekambani kuita chibvumirano;
8. Inotarisira kugadziriswa kwemutengo uye kuunganidzwa kwerwendo;
9. Pedzisa mamwe mabasa akapihwa nehutungamiriri zvinoenderana nezvinodiwa nekambani.
1. Yunivhesiti degree kana pamusoro, chikuru mukutakura zvinhu, kutumira, kutengeserana uye logistics inosarudzwa;
2. Disband general cargo ship bhizimusi, ziva nezve epasi rose enjiniya chirongwa logistics uye makuru zvikamu musika, uve neruzivo rwekushambadzira, uine bhizinesi zviwanikwa zvinofarirwa;
3. Inoziva nzira dzepamba uye dzekunze dzemitoro mizhinji, inokwanisa kupedzisa basa iri pasi pekumanikidzwa, nemweya wechikwata wakanaka nepfungwa yekutarisira;
4. Iva nehumwe ruzivo rwekushambadzira pamusika uye kugona kutonga, uye kuziva kwakanaka kwevatengi;
5. Unhu hunofadza, kufunga kwakajeka, hunyanzvi hwekuratidzira hunyanzvi uye kugona kugona kudzidza;
6. Chirungu chakanaka mukuteerera, kutaura, kuverenga nekunyora.
Mutengesi wekutengesa Dhipatimendi rekutengesa Koreji degree kana pamusoro 1-2 2020-04-09
1.Kutungamira iro dhipatimendi rekutengesa kuti ripedze iyo yemwedzi yekutengesa tarisiro.Supervise uye kurudzira vekutengesa vashandi kuti vashande.
2. Anenge makore mashanu ane ruzivo mukutenga kana kutumira bhizinesi rekufambisa kwegungwa nekuita kwakanaka.
3. Inozivikanwa nemusika weChina wekunze nekutengesa kunze kwenyika, unofarira kusimudzira bhizinesi uye kutumira kwenyika
4.Kupindura nekukurumidza, hunyanzvi hwekutaura, kugona kwekusimudzira kugona uye hunyanzvi hwekutaurirana, hukama
5. Zviwanikwa zvevatengi neChirungu chakanaka zvinosarudzwa.
6. Iva nebhizimisi rakasimba, chinangwa chakanaka chekusimudzira chebasa rekutengesa, kuzvikurudzira uye kugona kuzvidzora, kufunga kwakajeka, kutanga uye kushingairira, kugona kutaura nevanhu, vane pfungwa yebasa.
7. Batsira mutungamiriri wekutengesa mukumisikidza zvinangwa zvekutengesa, mamodheru ekutengesa, nzira dzekutengesa, mabhajeti ekutengesa uye zvirongwa zvekurudzira
1. Koreji degree kana pamusoro, rakakura mukushambadzira kana zvine hukama;
2. Makore anopfuura matatu ekushanda ruzivo muindasitiri yekutengesa, yekutengesa manejimendi ruzivo rwunodiwa;
3. Zvakapfuma zvevatengi zviwanikwa uye hukama, kugona kuita;
4. Kuongorora kwakasimba kwemusika, hunyanzvi hwekushambadzira nekusimudzira, kutaurirana kwakanaka kwevanhu pamwe nehunyanzvi hwekubatanidza, uye kugona kuongorora nekugadzirisa matambudziko;
5. Iva nepfungwa yakasimba yebhizinesi, uine humwe hutungamiriri.